Felicia Scott, Carethia Cury, kunye ne-Fetal Abduction
Umfazi oselula uhlala kwiiyure ezili-12 emva kokuba umntwana ususwe kwisibeleko sakhe.
I-Carethia Curry, eyi-17 kwaye ikhulelwe, yayingenaso isizathu sokukrokra ukuba umhlobo wakhe omtsha, owayekhulelwe, wayecebise icebo elimnandi lokumbulala aze athe umntwana wakhe ongakazalwa esibelethweni sakhe.
UFelicia Scott noFrederic Polion
Ngo-1995, uFelicia Scott waseTuscaloosa, u-Alabama, wayeneminyaka engama-29, unina wamakhwenkwe amabini kwaye ehlala kunye nesithandwa sakhe uFrederic Polion. UScott wayengenasigxina kulwalamano kwaye wayenethemba lokuba indlela kuphela yokugcina uPollion onwabile kukuba ngaba babini babenomntwana kunye.
Ngomnyaka ka-1995, wazisa uPolion, abahlobo kunye nosapho ukuba wayekhulelwe, kodwa kwakukho ingxaki ebantwini abambalwa abakuyo. UScott akazange akhulelwe ngenxa yokuba, ngo-1994, wayenomdla wokuhlambalaza.
Ngexesha elifanayo lokuba uScott wamemezele ukukhulelwa kwakhe, waba nesithandwa ngumntwana oneminyaka eyi-17 ubudala uCalltia Curry owayekhulelwe. Ithemba lakhula phakathi kwabafazi ababini abachitha ixesha elininzi kunye kunye nokuthengwa kwamasebe abantwana kubasitolo, kunye nokwabelana ngamabali amade alindelekileyo njengoko imihla yabo efanelekileyo yayisondela.
NgoJanuwari 31, 1996, uCharry, unina uCarol O'Neal, noScott bachitha imini. Emva kokuthenga, unina kaCharry wabuya ekhaya kunye noCharry, emva kweenyanga ezilisithoba ezikhulelwe, wamkela isimemo saseScott sokuba siye kudle i-pizza uze uhambele isikhashana ekhaya likaScott.
Njengoko kucetywayo, uScott noCharry baya ku-pizza baze baya kwiSpokethi, kodwa xa behlala ngaphakathi, endaweni yokuncokola nengqumbo, uScott wakhupha isibhamu waza wamphosa umhlobo wakhe okhulelweyo kabini entloko.
Iibhola ezazifakwe entloko kaCurry azizange zimbulale ngokukhawuleza, kodwa oko akuzange kumise iScott ukuba athabathe ummese kunye nokusika iCurry phantsi ubude balo bonke. Emva kokuba esuliwe evulekile, uScotle wasusa umntwana, waza wanyusa umzimba womama owayesweleka kwimfucuza yamatye waza wathinta.
UFrederic Polion Uhambisa Isandla
Xa uPollion wabuyela kwindlu yaseScott wathi kuye wayesebele apho waza wafaka zonke iilinen ezihlambulukile ngegazi.
Wamcela ukuba ayilahle. Uthi uyenzile njengoko wabuza, ephuma endleleni yakhe waya emlanjeni ophantsi ngaphandle kwedolophu ukuba ayilahle. Ngokutsho kwePollion, akazange akhangele okanye abuze ubunzima bezinto ezazingenkunkuma, kodwa wayeyifaka emlanjeni. Okwangoku, uScott wathatha umntwana wasesibhedlele eBirmingham waza wakwazi ukufumana amaphepha echaza ukuba nguye unina.
UCarolyn O'Neal waqala ukukhathazeka xa uCourry engakwazi ukubuyela ekhaya. Ngeenxa yesi-2 ekuseni wabiza indlu kaScott kunye noPolion waphendula ifowuni. Wambuza apho uCurtry wayenani kwaye wathi wayengayazi. Nge-5 ekuseni, uScott wabiza u-O'Neal waza wamxelela ukuba wayesehlile uCryry ekhaya nge-8: 30 ntambama, emva kokufumana i-pizza.
Ecinga ukuba into ethile yayingumsebenzi, u-O'Neal wabuza uScott ngokuthe ngqo, yintoni eyayiyenzile nentombi yakhe. UScott wayegwema ukuphendula waza waqala ukuchaza ukuba wayehlala eBirmingham enomntwana kwaye ukuba uthunyelwe ekhaya ngenxa yokuba wayengenayo inshorensi. UOneal akazange amkholelwe kwaye waqhagamshelana namapolisa ukuba abike ukuba intombi yakhe ibanjwe nguScott noPollion.
Xa u-O'Neal efumene ukuba uScott "wayebuyele ekhaya" nosana, wabiza amapolisa waza wabaxelela ukuba wayekholelwa ukuba uScott wayenomntwana intombi yakhe.
Ngomso wamapolisa abuza uScott malunga nokuba yiCurry. Emva koko bambuza malunga nosana lwakhe, kwaye ngokukhawuleza wakhiqiza iphepha elalisichaza igama lakhe njengomama. Ngexesha, uScott wayephephile.
Ekuqaleni kukaFebruwari, uScott waya kutyelela uyise waza wenza elinye ibali malunga nendlela ayephelile ngayo umntwana. Uthe amapolisa ayimise imoto ukuba yena nomhlobo wayegibele kwaye wafa. Xa evuka, umhlobo kunye namapolisa ayekho, kodwa ecaleni kwakhe kwisihlalo kwakuyingane. Uyise akazange akholelwe ibali kwaye wayeza kumcela ukuba ahambe xa kufika amapolisa waza wabamba uScott.
I-Carethia Curry ifumaneka
Ngomhla ka-14 kuMatshi 1996, umzimba kaCurry wafunyanwa ngaphantsi komlambo. Ubungqina, kuquka igazi kwiloli likaPollion, lathintele abashushisi ukuba ukubulala kwakungekho into eyenziwa yiScott kuphela.
UScott noPollion bahlawuliswa ngokuthumba nokubulala .
UPollion wema ngesigqibo sakhe sokuqala ukuba wayengazi nto ngokubulala. Ufunyaniswe enetyala lokuthunjwa waza waphuhlulwa kwiimali zokubulala waza wagwetywa iminyaka engama-20 entolongweni.
UScott ubeka uPollion icala lokubulala, esithi yena wahamba kunye naloo nto ngenxa yokuba wayesaba ubomi bakhe. Wafunyanwa enetyala zonke iindleko waza wanikwa isigwebo sokuphila ngaphandle kokubakho ukugqithiswa.
Kwakunqunywe nge-autopsy ethi Carethia Curry yahlala malunga neeyure eziyi-12 emva kokuba idutshulwa, yahlulwa isicatshulwa, kunye nosana lwakhe lwaqothuka emzimbeni wakhe.
Intombazana yaseCallthia yayisindiswa ngokumangalisayo ngxaki kwaye ekugqibeleni yabuyiselwa kuyise wendalo.
Iprofayili yobuCalulo: I-Debra Evans Case
Konke malunga neDowsing
Ukuchazwa kwezinto eziguqukileyo ezikhoyo
Isisindo sephepha: Yintoni i-300 gsm Ethethayo?
Bondye, uThixo Olungileyo weVodou
Ukuqubuka kwe-Ebola eSudan naseZaire